Ramsey iyo Torreira oo hogaaminaya Arsenal - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Ramsey iyo Torreira ayaa hogaaminaya Arsenal
Furitaanka 2-0 Arsenal oo ka badisay Napoli ayaa laga yaabaa inay ka muuqato xaqiiqda ah in labada kooxood ay dareemayaan niyadjab inayan ka faa'iideysan lugta koowaad ee wareega quarter-finalka Europa League. Kooxda martida loo ahaa ayaa fursad u heysatay inay sii dheereystaan ​​faa'iidadooda, halka Napoli ay qasaarisay fursado la soo bandhigay ka dib markii ay ka soo kabsadeen bilow xun.
Laakiin waa faa'idada uu leeyahay Arsenal, ka hor inta uusan ku laabanin Khamiista soo aadan ee Naples, sababtoo ah bilowgii farsamada waxay sameeyeen tartanka, gaar ahaan qaab ciyaareedka labo ciyaaryahan oo khadka dhexe ah. Lucas Torreira mar marka laga soo bilaabo Sampdoria, iyo Aaron Ramsey kuwaas oo ku biiri doona Juventus ka dib xilli ciyaareedkan, waxay ka yimaadeen Serie Ada iyo mustaqbalkiisa. siday u kala horreeyaan.
Waa wax dhif ah in la arko labada ciyaaryahan xilli ciyaareedkan, qeyb ahaan sababtoo ah Granit Xhaka - ayaa dhaawacmay Khamiistii - sidoo kale tababaraha Arsenal Unai Emery ayaa diiday inuu isticmaalo Ramsey isagoo si qoto dheer uga ciyaara.
Laakiin ciyaartan ayaa koox ku soo bandhigtay weerarka Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang horay iyo Mesut Ozil kaalinta No. 10, oo ay weheliso Ramsey Exploding iyo Torreira oo abuuraya wax badan oo ka fog.
Seddexda koob ee ugu horeysay ayaa la isku dhafay, inkastoo ay muujiyeen rabitaankooda, sida ugu wanaagsan ee Arsenal ay u heshay khadka dhexe, taas oo ka adkaatay bandhigga Allan . ] iyo Fabian Ruiz ; Nidaamka 4-4-2 ee Napoli ayaa u ogolaanaya inay ogaadaan in uu sii joogayo Ozil ama uu joojiyo Ramsey iyo Torreira.
Goolkii ugu horeeyay wuxuu ahaa mid farxad leh. Ainsley Maitland-Niles Waxaa xusuusta ka dambeysa garabka midig, qulqulista xariiqda dhexe iyo udub dhexaadka Ozil, oo soo gabagabeeyay ciyaarta, bedelay waxaana helay Ramsey. Wuxuu kubada u soo celiyay Ozil, kaasoo markii ugu horeysay u ciyaaray Lacazette. Kubadda ayaa ka dibna ku soo gashay Maitland-Niles 'ciqaabteeda ciqaabta ah, taasoo xukuntay, dibna ugu soo laabtay Ramsey.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Wales ayaa kubada u riixay geeska geeska ah si uu u dhaliyo goolal ka mid ah goolashii uu ka dhaliyay Arsenal. isdhexgalka iyo isdhexgalka. Ma ahayn wax aad u badan Jack Wilshere ka hor kulanka Norwich ou Tomas Rosicky vs. Sunderland laakiin si kastaba ha ahaatee, waa wax cajiib ah, oo ah nooca Napoli uu soo saaray Maurizio Sarri
Lucas Torreira, dhanka bidix, iyo Aaron Ramsey, oo dhinaca midig ah, ayaa door muhiim ah ka ciyaaray guulaha Arsenal ee ay la gashay Napoli. AP
Ma jirin wax baasas ah oo loo diyaariyay goolka labaad ee Arsenal, taasoo sidoo kale soo bandhigtay dhameystir dhameystiran, lakiin tani waxay xooga saareysaa weerarka martigelinta iyo guud ahaan tayada Torreira. Inkastoo Allan uu rigoore u dhigay Napoli, inuu Torreira u dhaqaaqo goolka, islamarkaana uu ka soo toogtay cagta bidix ka hor inta uusan cagta marin, islamarkaana uu garabkiisa lugta bidix u ciyaaro. Kalidou Koulibaly .
Waxa ay aheyd koobkii ugu danbeeyay ee Arsenal ee khadka dhexe, Napoli ayaana u muuqatay mid naxdin leh. Goolal badan ayaa u muuqday mid aan la dabooli Karin: Ozil ayaa ka hor istaagay caqabado adag Mario Rui Iyadoo Aubameyang uu ku soo laabanayo Lacazette waa inay soo bandhigaan natiijo ka fiican weerarka Faransiiska, sidoo kale Maitland-Niles ayaa ku dhuftay Aubamayeng. waayo dadaal xooggan oo aan ahayn heer sare oo ku filan.
Lakiin qeybtii hore ee ciyaarta ayaa keentay calaamada digniinta ah. Jose Callejon jebiyey midig iyo wuxuu ciyaaray hoos u dhac ku yimid Lorenzo Insigne iyadoo booska seddexaad ee Arsenal uu ku soo laabtay goolka, iyo khadka dhexe ee khadka dhexe ku jiray. Insigne ayaa la taabtay, laakiin waxa ay aheyd xusuusta ah in Arsenal aysan haysan ciyaaryahan kubada cagta ah oo bartamaha garoonka ah.
Iyadoo ay u muuqatay inay nugul yihiin daafacooda, dhibaatada Arsenal ka dib markii fasaxa uu ka danbeeyo. Inkastoo uu ku riyaaqay inuu cadaadis saaro bartamaha garoonka, Laurent Koscielny wuxuu amar ku bixiyay khidad sare oo si joogta ah loogu hanjabay inuu ka soo horjeedo isaga.
Iska ilaali, oo qoorta u rogay ujeedada saameynta cayaarta, waxay u soo dirtay tallaabo aad u fiican oo ku saabsan qadka dhabarka ee soo maray. Dries Mertens ; Xiriir kasta oo hubaal ah ayaa keenaya ujeedo. Kadib, baasid sahlan oo dusha ka saareysa Badge oo ku yaala midigta iyo xaruntiisuna waxay gaadhay galka Piotr Zielinski lakiin kubada uma ciyaari karo.
Emery wuxuu isku deyayaa inuu adkeeyo aasaaska: Alex Iwobi et Henrikh Mkhitaryan Ozil iyo Lacazette ayaa bedelay markii Gunners ay ka soo wareegtay tababarka 3-4-1-2 ee tababarka 3-4-2-1. -4-1; hase yeeshee intaa ka sii muhiimsan ayaa ahayd hordhaca ah Mohamed Elneny ee Torreira si looga hortago waxyaabaha horta difaaca.
Kadib, Emery waxa uu sheegay in uu ahaa "50%" oo ku qanacsanaa dhibcaha, laakiin wuxuu yiri, "Labada dhinacba way kala duwan yihiin," Emery ayaa sidaas yidhi. "Qeybtii hore, waxaan xakameynay ciyaarta kubada iyo booska, waxaana weerari karnaa garoonka iyo ciyaartoyda. Qeybta labaad way naga duwan tahay; Wax badan ayay ku riixeen, waxay qabsadeen kubada, waxaana heysanay hantidii weyneyd. "
Emery ayaa sidoo kale soo jeediyay in Arsenal ay u soo gudubto wareega labaad ee Napoli.
"Waxaan diyaarin doonaa kulanka, qorshaha ciyaarta, fikradana ma bedeli doono" ayuu hadalkiisa raaciyay. "Waxaan dooneynaa inaan badino kulan kasta, goolkeenana sidoo kale waa la maqnaan doonaa. Laakiin way ku xoog badan yihiin guriga. "
Dhiniciisa, Carlo Ancelotti oo ka tirsan Napoli ayaa qiray in Arsenal ay "gardarro badan tahay, qeybtii hore ee ciyaarta", ka hor inta uusan ku adkeysan in kooxdiisa ay wali rajo ka leedahay: "San Paolo way ka duwanaan doontaa. Waa inaan la ciyaarnaa xoogaa badan oo xoogan. 3-0 lahaa wax aan macquul aheyn. 2-0, waxaan leenahay fursad, laakiin wax badan maaha. "
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa sheegay in kooxda Arsenal ay dooneyso inay ku soo laabato hogaanka horyaalka Serie A xilli ciyaareedkan. Laga soo bilaabo aragtidaas, Emery wuxuu u maleyn karaa in XI kale oo diiradda saaraya weerarka uu noqon karo habka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in uu marayo afartii ugu danbeysay ee tartanka.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/blog/the-match/60/post/3821031/aaron-ramsey-lucas-torreira-lead-arsenal-attack-from-midfield-vs-napoli
Liga: Barnaamijka iyo natiijooyinka maalinta 32th - FOOT 01